Jeremaya agaghị alụ nwaanyị, ọ gaghị eru uju, ọ gaghịkwa eme oriri (1-9)
A ga-ata ndị Izrel ahụhụ, e mechaa, ha alọghachi n’ala ha (10-21)
16 Jehova gwara m okwu ọzọ, sị: 2 “Alụla nwaanyị, amụkwala ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị n’ala a. 3 E nwere ihe Jehova kwuru banyere ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị a mụrụ ebe a, nakwa banyere nne na nna mụrụ ha n’ala a. O kwuru, sị: 4 ‘Ọrịa dị iche iche ga-egbu ha,+ ma e nweghị onye ga-eruru ha uju. E nweghịkwa onye ga-eli ha. Ha ga-aghọ nsị anụ n’elu ala.+ Mma agha na ụnwụ ga-ala ha n’iyi.+ Nnụnụ na anụ ọhịa ga-ejikwa ozu ha mere nri.’ 5 Jehova kwukwara, sị,‘Abanyela n’ụlọ ebe ndị na-eru uju na-eme oriri,Agala ibe ákwá arịrị. Asịkwala ha ndo.’+ N’ihi na Jehova sịrị, ‘Agaghịzi m ekwe ka udo dịrị ndị a. M ga-akwụsị ịhụ ha n’anya, kwụsịkwa imere ha ebere.+ 6 Ma ndị ukwu ma ndị nta ga-anwụ. A gaghị eli ha eli. E nweghị onye ga-eruru ha uju,E nweghịkwa onye ga-eji maka ha bekasịa onwe ya ahụ́ ma ọ bụ kpụchaa isi, ya ana-akwọ mụrụmụrụ.* 7 E nweghị onye ga-enye ndị na-eru uju nriIji kasie ha obi maka ndị ha nwụrụ anwụ. E nweghịkwa onye ga-ebunye ha iko mmanya dịKa ha ṅụọ iji kasie ha obi maka nna ha ma ọ bụ nne ha nwụrụ anwụ. 8 Abanyela n’ụlọ a na-eme oririGaa soro ha nọrọ ọdụ na-eri, na-aṅụ.’ 9 “N’ihi na Jehova nke ụsụụ ndị agha, bụ́ Chineke Izrel, kwuru, sị, ‘M ga-eme ka a kwụsị ịnụ olu ndị na-aṅụrị ọṅụ, olu ndị na-enwe obi ụtọ, olu nwoke na-alụ nwaanyị ọhụrụ, nakwa olu nwaanyị a na-alụ ọhụrụ.+ M ga-eme ihe a n’obodo a, n’ihu unu nakwa mgbe unu ka dị ndụ.’ 10 “Ọ bụrụ na ị gwachaa ndị a ihe a niile, ha ga-ajụ gị, sị, ‘Gịnị mere Jehova ji kwuo na nnukwu ọdachi a niile ga-adakwasị anyị? Olee otú anyị si mehie? Oleekwa iwu Jehova Chineke anyị anyị mebiri?’+ 11 Gwa ha na Jehova kwuru, sị, ‘“Nna nna unu hà hapụrụ m,+ gaa na-eso chi ọzọ dị iche iche, na-efe ha, na-akpọkwara ha isiala.+ Ha hapụrụ m. Ha edebeghịkwa iwu m.+ 12 Ununwa na-eme ihe ọjọọ karịa nna nna unu hà.+ Onye ọ bụla n’ime unu akwụsịla irubere m isi ma kpọchie ntị na-eme ihe ọjọọ dị ya n’obi.+ 13 N’ihi ya, m ga-esi n’ala a chụga unu n’ala ma ununwa ma nna nna unu hà na-amaghị.+ Unu ga na-efe chi ọzọ dị iche iche ebe ahụ, ma n’ehihie ma n’abalị,+ n’ihi na agaghị m emere unu ebere.”’ 14 “Jehova kwuru, sị, ‘Oge na-abịa mgbe ha na-agaghịzi na-asị: “Eji m Jehova, bụ́ Chineke dị ndụ, onye si n’Ijipt kpọpụta ndị Izrel, na-aṅụ iyi.”+ 15 Kama, ha ga na-asị: “Eji m Jehova, bụ́ Chineke dị ndụ, onye si n’ala dị n’ebe ugwu nakwa n’ala niile ọ chụsasịrị ndị Izrel kpọlata ha, na-aṅụ iyi.” M ga-akpọlata ha n’ala ha, nke m nyere ndị nna nna ha.’+ 16 Jehova kwukwara, sị, ‘M na-ezi ozi ka ọtụtụ ndị na-akụ azụ̀ bịa. Ha ga-akụta ndị m ka azụ̀. E mechaakwa, m ga-ezi ozi ka ọtụtụ ndị dinta bịa. Ha ga-achụ nta ndị m ma n’ugwu ukwu ọ bụla ma n’ugwu nta ọ bụlaMa n’ebe ndị gbawara agbawa ná nnukwu nkume. 17 N’ihi na anya m dị n’ihe ọ bụla ha na-eme.* E nweghị ebe ha ga-ezo mụ aghara ịhụ ha. M jikwa anya m na-ahụ mmehie ha niile. 18 Ma, m ga-ebu ụzọ taa ha ahụhụ niile e kwesịrị ịta ha maka njehie ha na mmehie ha,+N’ihi na ha ejirila arụsị ha dị iche iche na-asọ oyi merụọ ala m. Ha emeela ka arụsị ha rụrụ arụ jupụta n’ala m niile.’”+ 19 Jehova, onye bụ́ ike m na ebe m a rụsiri ikeNakwa ebe m na-agbaba n’oge ahụhụ,+Ọ bụ gị ka mba dị iche iche n’ụwa ga-abịakwute. Ha ga-asịkwa: “Nna nna anyị hà nọ na-efe arụsị dị iche iche*Na ihe ndị na-enweghị isi nakwa ihe ndị na-abaghị uru ọ bụla.”+ 20 Mmadụ ọ̀ ga-akpụli ezigbo chi? Ihe ọ bụla mmadụ kpụrụ abụghị ezigbo chi.+ 21 “Ugbu a, m ga-eme ka ha mara ike m,Marakwa otú m siruru ike. Ha ga-amarakwa na aha m bụ Jehova.”
^ Ọ bụ otú ndị na-ekpere arụsị si eru uju onye nwụrụ anwụ. Ọ ga-abụ ihe ndị Izrel kwụsịrị ife Chineke nọ na-eme.
^ Na Hibru, “dị n’ụzọ ha niile.”
^ Na Hibru, “ketara ụgha.”